Archive du 11-nov-2020
Vohipeno Maty ilay zaza naolany dia namono tena izy!
Mirongatra izay tsy izy ary saika ho isanandro mihitsy ny trangana fanolanana zaza tsy ampy taona na eto an-drenivohitra na any aminny faritra. Ny atoandron'ny alatsinainy 9 Novambra teo, zazavavy kely 11 taona indray no naolan'ny lehilahy 35 taona tao Ambodiakondro,
Lasopy matsiro fa mampihena
Akora ilaina : Chou-fleur 1  Brocoli 1  Menaka oliva 1 sf  Tongolo gasy voatetika 1 sf  Tongolobe 1 voatetika madinika  Ronono amandy tsy mamy 65 santilitatra (tsena lehibe)  Fraomazy voakiky 50g  Sira ¼ sk  Dipoavatra
50 taona no mihoatra
ny atao hampitoniana kentrona
«Smoothie » manga sy vomanga, mahatsara lokon-koditra
Miditra aminny vanim-potoana fahavokaranny manga isika. Ankoatra ireo vokatsoa azo aminny fihinanana azy dia isanny manampy be aminny fanaovana bronzage
Cancer : Sitrana tanteraka rehefa
Manazava ny Dr Oncologue
« Bjr Dr, vao nodidiana taminny homamiadana nahazo azy ny Reniko, 45 taona. Azo antoka ve fa efa sitrana tanteraka izy ary tsy hiverina intsony ilay aretiny ? » Caline, 28 taona.
Te hanara-maso be ny vadiko aho rehefa mandeha manao mission izy.
Tsy mba manaiky izany mihitsy mantsy izy hoe mba hanaraka azy aho indraindray. Lasa saropiaro aho ka liana te hamantatra anizay tena ataony any sao mampirafy izy.
Lalaonny Barea sy ny Elefanta Ho alefa mivantana etsy Analakely
Efa ao anatinny fanomanana tanteraka ny ekipantsika Barea aminizao fotoana satria efa tonga ny alatsinainy alina daholo ireo mpilalao izay nandeha taminny sidina niainga tao Parisy.
Hôtel La Maison Lovasoa, Un havre de paix au cur de la ville
Si vous êtes à la recherche dun endroit chaleureux, calme et cozy en centre ville, LHôtel La Maison Lovasoa est lendroit rêvé pour vous. Il se situe à Ambohijatovo, à quelques mètres de la station Jovenna.
1. Choucou foulard  6.000Ar Immeuble Tia Shop Tsaralalana- Magasin safidy box 3.3 2eme étage  Contact: 033 79 655 39,033 79 655 42
Ny fanabeazana aizana mety aminao
Tsy mitovy ny fomba fanabeazana aizana sahaza ny vehivavy rehetra. Miankina aminny taona sy ny fiainam-pananahany izany, na dia mitovy ihany aza ny tanjona, dia ny fisorohana ny vohoka tsy niriana sy ny aretina azo avy aminny firaisana ara-nofo.
Ozinina manodina Mangahazo Napetraka ao Atsimo
Mitohy hatrany ny fametrahana vahaolana maharitra enti-miady aminny tsy fanjarian-tsakafo any aminny faritra Atsimo. Anisanizany ny fitahirizana sy ny fanodinana mangahazo ho « gari » na koba.
« Ventes aux enchères solidaires » Hanampiana ankizy sy tanora Malagasy sahirana
Mikarakara hetsika izay nampitondrainy ny anarana hoe « vente aux enchères solidaires » ny fikambanana Zazakely Sambatra ny 13 hatraminny 20 novambra izao.
Tanora mirotsaka an-tsitrapo hanompo ny firenena Hahazo fiofanana
Tontosa omaly talata ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard sy ny Minisitry ny Fampianarana Tekinika ary ny Fanofanana Arak'Asa, Andriamatoa TSIKEL'IANKINA Ernest.
Fiomanana aminny loza voajanahary Hahiana manokana ireo manana fahasembanana
Nitohy tany aminny faritra Diana ny fanatanterahana ilay atrikasa fanavaozana ny drafi-paritra iatrehana ny hamehana sy ny loza vojanahary izay notarihinny ekipani BNGRC ary niarahany taminireo ekipani Tetikasa Miaro avy ao aminy DistrikanAmbilobe sy ao aminny faritra Diana.
EPP Ambatobe Hahazaka mpianatra 130 fanampiny
Efitrano fianarana 3 ihany no nisy tao aminny EPP Ambatobe teo aloha. Voatery nozaraina roa ireo mpianatra 320 voasoratra tao aminity Sekoly ity ka tsy maintsy mifandimby mianatra ny maraina sy ny hariva izy ireo.
Kahie misy diso niparitaka Nitory ny minisitera
Nanao fanambarana ny minisiteranny fanabeazam-pirenena fa diso tanteraka ny vaovao niely fa tolotra fanampiana ny mpianatry ny sekolim-panjakana, ireo kahie misy kajy diso avy ao ambadika.
AMBATONDRAZAKA Nahazo « Village orange » hamaliana ny filanny mponina
Tsy diso anjara aminny fahazoana ny « village orange » ny any aminny distrikanAmbatondrazaka. Notokanana ny faranny herinandro teo ny village orange faha-27 napetraka any an-toerana izany natao indrindra hanampiana ireo mponina aminny fiainana andavanandro ho anireo faritra somary mitoka-monina.
Nomcebo (Jerusalema) Efa tonga eto amintsika
Efa nigadona teto Madagasikara omaly, tokony ho taminny 2 ora sasany tolakandro, i Nomcebo Zikobe, ilay mpanakanto afrikanina mpihira ilay hira malaza hoe : Jerosalema.
Mananjary Efa azo jifaina ny henomby
Efa azo jifaina aminizay ny henomby ao Mananjary satria tapitra ny fitokonana nataonireo mpivaron-kena, rehefa avy nifampiresaka taminireo tomponandraikitra ao an-toerana. Raha tsiahivina ny zava-nitranga, dia nisy arrêté ministeriel
Fangalana « pension » Mila mitandrina ireo zokiolona fa misy ireo mpisoloky mody manampy
Zokiolona iray, mipetraka any Antsirabe, no lasibatrireo mpisoloky, rehefa naka « pension » na fisotroan-dronono. Raha ny fitantaranireo nanatri-maso dia nisy tovolahy iray nanatona azy, nilaza ny te-hanampy azy, aminny famenoana ny taratasy hangalana ilay pension.
SALON DE LETUDIANT ET DE LEMPLOI (FAHAROA) Hisy fampianarana maimaim-poana
Hotanterahina ny 23 ka hatraminny 25 Novambra ho avy izao ilay « Salon de létudiant et de lemploi » andiany faharoa karakarainny Maison de la communication des universités etsy aminny zaridainanAnosy.